Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 54
Moa ve ny magnetism-biby, ny mesmerism, ary ny hypnotisma mifandray, ary raha izany, ahoana no ifandraisan'izy ireo?
Ny mahery vaika ho an'ny biby dia hery mifandraika amin'ny magnetism izay hita amin'ny vatana tsy misy aina, toa ny lodestones sy ny magnet maneno. Ny hery mitovy dia atsangana ho an'ny hery ambony kokoa amin'ny vatan'ny biby. Ny magnetism dia ny fiasan'ny hery amin'ny alàlan'ny vatan'ny biby izay manana endrika ara-drafitra sasany, mifandraika amin'ny polarization, ka mahatonga ny firafitra hanentana ary avy eo ho toy ny fantsona mitondra ny hery mahery vaika amin'ny vatana hafa.
Ny Mesmerism dia anarana nomena ny fampiharana ny magnetism biby, aorian'ny Mesmer (1733-1815), izay namerina nahita indray ary avy eo nampianatra sy nanoratra momba ny hery eto izay antsoina hoe magnetisme biby.
Ny Mesmer, indraindray dia nampiasa magnetism biby matetika; nisy fotoana nampiasainy ny sainy nifandray tamin'ny magnetisme. Ny fomba fanaony dia antsoina hoe mesmerism. Nentaniny ho toy ny hery mikoriana mahery ny sisan-tariby ho an'ny vatan'ny marary, ka nahatonga ny torimaso indraindray, ary nantsoina hoe natory tampoka izy, ary matetika dia nanasitrana azy taty aoriana. Matetika izy nametraka ny marary, rehefa teo ambanin'ny fitaoman'ny mesmerika ny marary, ho any amin'ny fanjakana samihafa, izay nilazan'i Mesmer anarana samihafa. Ny fomba sy ny fiovany dia voatonona mpanoratra maro momba izany.
Ny fihatsarambelatsihy dia, arakaraka ny anarana, dia ny mahatonga ny karazan-torimaso. Ny fitenenan-tena dia miteraka torimaso amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny sain'ny olona iray rehefa mamadika tanteraka ny fitsipiky ny saina ny olona iray na ampahany amin'ny saina. Ny hypnotism amin'ny ankapobeny dia ny fiasan'ny saina tokana, miaraka amin'ny tsy misy ny fanampian'ny biby maneno, hany ka ny torimaso amin'ny lohahevitra hypnotic dia vokatry ny fiheveran'ny mpandraharaha rehefa manelingelina tanteraka na ampahany amin'ny fifandraisana amin'ny saina tsy mivaona izy afovoany izay miasa ao anatin'ny atidohan'ilay lohahevitra. Ny torimaso hypnotic, vokatry ny fanelingelenana ny fifandraisana amin'ny fantsom-pisainana sy ny afovoany izay mampiavaka azy, dia tsy mitovy amin'ny torimaso mahazatra.
Amin'ny torimaso ara-dalàna dia mivoaka ny foiben'ny saina ao anaty ati-doha ny saina, ary ny toetra dia afaka manamboatra ny vatana sy mamerina ny fifandanjana eo amin'ireo sela. Ny fitsipiky ny saina dia mety hivezivezy manodidina ny afovoan'ireo nerby fahatsapana ao amin'ny atidoha, na mety hiala ambanin'ireo ivony ireo. Raha mijanona manodidina ny iray na maromaro amin'ireo ivon-toerana mifandray amin'ny fahitana, fandrenesana, fofona, tsofina, ny tory ny torimaso, ny nofinon-tory, ary ny nofiny dia fahitana mahatsiravina, na ara-batana na amin'ny tontolo anatiny mifandray amin'ny ara-batana. Amin'ny torimaso tsy matory dia mijanona ho mahatsiaro tena hatrany ny foto-pisainana mahatsiaro, saingy raha esorina amin'ny eritreritrao izy dia tsy mahay mandika izay fantatry ny olona ny olombelona.
Ny fametrahana torimaso hypnotic dia fanelingelenana amin'ny fitsipiky ny hafa, izay tsy afaka na tsy hahatohitra ny fitsabahana. Rehefa esorina tsy ho ao afovoan-tsaina ny fitsipiky ny foto-kevitra, izay ifandraisany mandritra ny fifohazana, ny lohahevitra dia latsaka amin'ny torimaso hypnotic, izay torimaso tsy manam-petra na tsy mahatsiaro tena, araka ny halavany lavitra na somary tsy dia lavitra loatra Ny hypnotizer dia nahomby tamin'ny fitondrana ny fitsipiky ny foto-kevitra. Mandritra ny torimaso hypnotis dia mety mahatonga ny lohahevitra hahita na handre na hanandrana na fofona na mahatsapa misy fihetseham-po mety hiainana amin'ny fahazarana, na mety mahatonga ny lohahevitra hanao izy na hilaza izay tadiavin'ny hypnotizer azy. ny mampiavaka azy irery, na izany aza, dia tsy vitany ny hanery ny olona hanao zavatra maloto izay manimba ny fiheverana ny foto-kevitra ao amin'ny firenena mifoha.
Ny sain'ny mpandraharaha dia maka ny toeran'ny fitsipiky ny foto-keviny momba ny foto-keviny, ary ny foto-kevitra dia hamaly sy hankatò ny eritreritra sy ny fitarihan'ny hypnotizer, araka ny mazava sy ny herin'ny fisainana hypnotizer ary ny mari-pahaizana ifandraisany. miaraka amin'ny atidohan'ilay ati-doha.
Ny valin'ny fanontaniana momba ny fifandraisan'ny magnetisma biby, ny mesmerism, ary ny hypnotism dia ny maha-magnetismin'ny biby, ny hery voajanahary miasa amina vatana ka hatrany amin'ny vatana; mesmerism dia fomba iray ampiharina ny magnetism biby; Ny hypnosis dia vokatry ny fampiasana ny herin'ny saina iray izay naseho tamina saina hafa. Azo atao ny manamboatra sainny valin-dresaka amina saina. Ny hypnotist dia afaka manondro lohahevitra momba ny fanekena hypnotic amin'ny alàlan'ny fiasana voalohany amin'ny magnetism biby amin'io resaka io; fa ny maha-magnetism ny hery sy ny hery hypnotic dia tsy mitovy.
Ahoana no ahafahan'ny magnetism biby atao mavitrika ary inona no azo ampiasaina?
Ny vatan'ny biby dia mety hambolena amin'ny alàlan'ny fanaovana ny vatany ho toy ny andriambola tsara sy foibe iray izay mahasarika ny hery an'izao tontolo izao, izay miasa toy ny magnetisme. Ny lehilahy iray dia afaka manao ny vatany ho marika tsara ho an'ny fiainana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny taova ao amin'ny vatany manatanteraka ny asany amin'ny fomba voajanahary sy mahazatra ary amin'ny alàlan'ny fisorohana ny tafahoatra amin'ny fihinanana, fisotroana, ny torimaso ary ny fifehezana ny natiora. Ireo tafahoatra ireo dia miteraka fahatapahan-jiro fitehirizana, izay endrika tsy hita maso amin'ny vatana ara-batana, indraindray antsoina hoe vatana astral. Ny tsy fihoaram-pefy tafahoatra dia mamela ny vatana endrika ho lasa matanjaka ary mahatonga ny polarization tsikelikely sy ny fanitsiana ny molekiola izay voatonona teo aloha. Rehefa manangana ny vatana dia lasa fitantanan'ny hery mahery vaika.
Ny sasany amin'ireo fitaovana azo ampidirina vondron'ny biby dia ny fananganana vondron'olona manokana, mba hanatanjahana ny vatana sy ho salama ary hahasitrana aretina amin'ny hafa, hamoahana torimaso magnetika - izay tsy diso amin'ny torimaso hypnotika - ary noho izany clairaudience sy clairvoyance, ary faminaniana ara-paminaniana, ary mba hamokarana vokatra mahatalanjona, toy ny fiampangana ny talismans sy ny amulets miaraka amin'ny angovo mahery vaika. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny fampiasana izay mety hametrahan'ny vatan'ny biby dia ny fanohizana sy fanamafisana ny vatana endrika tsy hita maso ka haorina sy hamboarina indray ary mety tsy maty.